Samachar Batika || News from Nepal » लभ से:क्स र धोकाले डुबाएको एक प्रेम
लभ से:क्स र धोकाले डुबाएको एक प्रेम
नुवाकोटकी मनमाया तामाङ माइत बसेको लामै समय भएको थियो। फुर्सदिली उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थिइन्। सञ्जालमा जोडिएका साथीको मध्यमबाट उनीलाई नयाँ व्यक्तिले साथी बन्न प्रस्ताव ग-यो। उनले साथी बन्न आएको प्रस्ताव स्वीकार गरिन्। त्यसपछि हल्काफुल्का कुराकानी हुन थाल्यो।
यसको सात महिनापछि उनीहरु अझ नजिक बने। नजिक बन्नका लागि सजिलो कारण बन्यो, दुवै जनाको समान पी’डा। उदयपुरका भीम सुबेदीले आफ्नी पत्नी बितेको पाँच वर्ष भइसकेको बताएपछि श्रीमानबाट अलग रहेकी मनमायाको मन पग्लियो। त्यस पछि नम्बर साटासाट गरेर उनीहरु फोनमा रम्न लागे।
त्यसपछि उनीहरु काठमाडौँमा कोठा लिएर बिहे नगरी नै सँगै बस्न थाले। एक महिनासम्म त सबै कुरा ठीकठाक नै थियो तर बिस्तारै भीमले आफ्नो असली रुपमा आउँदै थिए। उनले मोबाइल लुकाउनेदेखि मनमायालाई झूट बोलेर अरु नै केटीहरुलाई भेट्न जान थाले। मनमायाले सुरुसुरुमा त शं’का गरिनन् तर एक पटक भीम आमा बिरामी भएको ब’हाना गर्दै अन्य केटीहरु भेट्न गएको थाहा पाइन्।
यसपछि मनमायाले भीमको क’र्तुतको लाइनै फेला पारिन्। केटीहरुसँग डुल्ने बानी भएका भीम एकै ठाउँमा टिक्न पो कसरी सक्थे ! भीमले पहिला बोलेका कुरा एकपछि अर्काे झूट परिणत हुँदैगयो। भीमले मनमायाको विश्वास जित्न साथीभाइलाई समेत कोठामा ल्याए। अहिले उनका साथीभाइ पनि अचम्म परेको मनमाया बताउँछिन्। इमान्दार छवि बनाएका भीमको असली रुप मनमायाको अघि उ’दाङ्ग हुन थाल्यो, उनी त्यति अलमलमा पर्न थालिन्। उनले भीमसँग छुट्टिने कोसिस पनि गरिन् तर सकिनन्।
अन्ततः भीमले मनमायालाई थाहा नै नदिई सुटुक्क देश छाडे। पछि मनमायाले उनलाई फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि भीम सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। आए पनि मनलाग्दी बोल्न थाले।
यता मनमायाका पूर्वपतिसँग एक सन्तान पनि छन्। भीमले धो’का दिएपछि उनले पूर्वपतिसँग आफ्नो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रयास गरे पनि असफल भइन्। यसपछि उनी भीमको घर खोज्दै उदयपुर पुग्दा उनले अर्को सरप्राइज फेला पारिन्, न त भीमले पहिले बिहे गरेका रहेछन् न त उनी विधुर रहेछन् ! अविवाहित छोराको बुहारीका रुपमा अचानक मनमाया हक खोज्दै उदयपुर पुगेपछि भीमको परिवारले स्वीकार गर्न चाहेन।
सामाजिक सञ्जालमा भएका मीठा पिरतीका कुराकानीबाट मख्ख भएर घरै छाडेर हिँड्ने युवतीको संख्या बढिरहेको छ। सञ्जालको भर पर्दा बर्दियाकी शर्मिलाले पनि यस्तै अवस्था भोग्नु परेको छ। १७ वर्षकी शर्मिला (नाम परिवर्तन) कविता लेख्न हुरुक्क हुन्थिन्। फेसबुकका विभिन्न साहित्यिक समूहमा उनी निकै सक्रिय हुन्थिन्। कविता लेख्नु र फेसबुकमा पोस्ट्याउनु उनको दैनिकी थियो। यसै क्रममा झापाका अर्का एक साहित्य अनुरागी २३ वर्षीय विनोद (नाम परिवर्तन)सँग उनी जोडिइन्।
दुवैको रुचि साहित्य भएकाले नजिकिन समय लागेन। तीन चार महिनाभित्रै शर्मिला विनोदलाई भेट्न काठमाडौं आइन्। विनोदसँग केही समय सँगै बसेर पुनः बर्दिया फर्किएकी शर्मिलासँग विनोद टाढिदै गए। अन्ततः दुवैको बाटो अलग भयो।
हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय असरल्ल देखिएका घट’नाका प्रतिनिधि पात्र हुन् यी। मनोविद् गोपाल ढकाल पछिल्लो समय प्रेममा आत्मियता हराउँदै गएको र एकअर्कालाई नबुझी सिधा सम्बन्ध राख्दा समाजमा अनेक वि’कृति बढेको बताउँछन्।
क्षणिकको आत्मियताले प्रेम गहिरिनुको साटो दु’र्घटना बढेको मनोविद् गोपाल ढकाल बताउँछन्। ‘सामाजिक सञ्जालले त सानो उमेरमा नै प्रेममा पर्ने, बालविवाह र यौ’न हिं’सालाई बढावा दिइरहेको पो देख्छु म त !’ मनोविद् ढकाल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय प्रेमको गलत परिभाषामा युवापुस्ता रमाइरहेको देखिन्छ। जुन घा’तक छ।’
सामाजिक सञ्जालको उदयपूर्व प्रेमले यति विकृ’त रुप लिइसकेको थिएन। त्यो बेला सम्बन्धमा घा’त गर्न सक्ने अवस्था खासै हुँदैनथ्यो। विकल्प पनि कम थिए। त्यसकारण पनि मानिसहरु सम्बन्धलाई महŒव दिन्थे। ‘अहिले सामाजिक सञ्जालले धेरै विकल्प जुटाइदिएको छ र यही प्रेम, प्रेम नभएर बजारमा बेच्न राखिएको वस्तुजस्तो भएको छ,’ प्राध्यापक उप्रेतीको धारणा छ।
हाम्रो समाजमा वैवाहिक सम्बन्धमा तीतोपना ल्याउन सामाजिक सञ्जालले भूमिका खेलिरहेको प्राध्यापक उप्रेतीको अनुभव छ। ‘खोक्रो आत्मियता र स्वार्थको पछाडि दौडिएर युवापुस्ता प्रेम गर्दैछ,’ मनोविद् ढकाल चिन्ता गर्दै भन्छन्, ‘यसले भविष्यमा ठूलो दुर्घ’टना निम्त्याउनेमा दुई मत छैन।’
सामाजिक संजालका कारण एकै पटक धेरैसँग प्रेम गर्न सकिने र त्यो प्रेमलाई गो’प्य राख्न सकिने वातावरण पनि बनेको छ। एउटै म्यासेज धेरैलाई पठाउन सकिन्छ। अर्काको भावनासँग खेल्न सामाजिक सञ्जालले बद’मास प्रवृत्तिका मानिसलाई सघाउ पु¥याइरहेको छ। यसले गर्दा मान्छेको भावनामा चो’ट पुगेको छ र मानिसले गतल कर्म गर्न पनि आफूलाई तयार गरिरहेको जस्तो देखिएको प्राध्यापक उप्रेतीको भनाइ छ।
त्यसो त सामाजिक सञ्जालको राम्रो पक्ष हुँदै नभएको होइन। मनोविद ढकाल भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएर पनि राम्रो जीवन बिताइरहेकाहरु पनि छन तर ती औँलामा गन्न सकिन्छ। वि’कृति चाहिँ आश्चर्यजनक तरिकाले बढी नै छ। जुन नेपालीहरुको चरित्र होइन।’
वैवाहिक जीवन बिग्रनुको मूल कारण वैदेशिक रोजगारी नै देखिएको छ। मनोविद् ढकालको नजरमा लोग्ने विदेश परिवारका लागि जाने, श्रीमती यता खाली समय व्यतित गर्न सामाजिक सञ्जालमा बिताउने, अरु नै सँग हि’मचिम बढाउने र कृत्रिम सम्बन्धलाई महत्व दिने र यही सम्बन्ध यौ’नसम्म पुग्ने देखिएको छ। जब यस्तो सम्बन्ध यौ’नमा पुग्छ र गडबडाउँछ, त्यहाँ घात–प्र’तिघा’त हुन्छ।
यसलाई न्यूनीकरणका लागि आफ्नै मनस्थिति परिवर्तन गर्नुपर्ने, संयमता अपनाउनुपर्ने मनोविद् गोपाल उप्रेतीको सुझाव छ। शुक्रवार साप्ताहिकबाट
प्रकाशित मिति ३ श्रावण २०७७, शनिबार ०८:१८